Fisorohana ny areti-mifindra
Ny saron-tava fiarovana dia iray amin'ireo lahatsoratra fiarovana mahomby hisorohana ny aretin'ny taovam-pisefoana, izay mitana andraikitra lehibe amin'ny fanaraha-maso sy ny fiarovana amin'ny areti-mifindra. Tena zava-dehibe tokoa ny mahafeno ny fenitra momba ny kalitao ilaina mba hiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny olona. Raha vao misy ...
Miaraka amin'ny fampandrosoana mitohy ny areti-mifindra dia nitombo be ny fanjifana masika. Ny mason-tava rehetra vokarina dia arovana fiarovana bebe kokoa ho an'ny vahoaka sy ny mpiasan'ny mpitsabo. Ny departemantan'ny mahay sy ny orinasam-pamokarana mifandraika amin'izany dia mihazakazaka amin'ny fotoana. Araka ny ...